Vyvanse ကိုကြာရှည်ခံနိုင်မလား? Vyvanse ဘယ်လောက်ကြာကြာခံမလဲ - မူးယစ်ဆေးဝါးသတင်း | ဇွန်လ 2022
ဖျော်ဖြေရေး ကုမ္ပဏီ, မူးယစ်ဆေးဝါးအချက်အလက် ကျန်းမာရေး ရပ်ရွာ ဆေးပညာသတင်း, ကျန်းမာရေးပညာရေး အိမ်မွေးတိရိစ္ဆန် ကျန်းမာရေး ကျန်းမာရေးပညာရေး ကုမ္ပဏီ, မူးယစ်ဆေးဝါးဆိုင်ရာအချက်အလက် ရပ်ရွာ၊ ရပ်ရွာ၊ ကုမ္ပဏီ ကျန်းမာရေးပညာရေး၊ နှိပ်ပါ သတင်း ကျန်းမာရေးပညာရေး၊
အဓိက >> မူးယစ်ဆေးဝါးသတင်း >> Vyvanse ကိုကြာရှည်ခံနိုင်မလား?
အကယ်၍ သင်သည် Vyvanse ကိုပုံမှန်သောက်ပါက၊ အာရုံစူးစိုက်မှုလိုငွေပြမှု hyperactivity disorder (ADHD) ကိုကုသရန်အသုံးပြုသောဆေးညွှန်းဖြစ်သောမူးယစ်ဆေးများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်ဆိုလျှင်သင်၏လုပ်ဆောင်မှုစာရင်းမှအရာအားလုံးကိုမကျော်လွှားခင်ရည်ရွယ်ထားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုလျော့နည်းသွားလိမ့်မည်ကိုသင်စိုးရိမ်လိမ့်မည်။
Vyvanse သည်အာရုံစူးစိုက်မှုကို ၁၄ နာရီအထိတိုးတက်စေသည်။ သို့တိုင်များစွာသောသူတို့သည်၎င်းကိုမည်သို့ပိုမိုကြာရှည်တည်တံ့စေနိုင်သနည်း၊ မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်ကိုမေးမြန်းခဲ့ကြသည်။
ADHD ဆေးသည်ငါတို့လိုချင်သလောက်ကြာရှည်ခံနိုင်မည်မဟုတ်ဟုသူကဆိုသည် ဒေါက်တာဒံယလေသ Lieberman ဂျော့ခ်ျဝါရှင်တန်တက္ကသိုလ်ဆေးပညာနှင့်ကျန်းမာရေးသိပ္ပံတွင်စိတ်ရောဂါကုသမှုနှင့်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာပါမောက္ခဖြစ်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်ရှစ်နာရီကနေ ၁၀ နာရီကြာပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ဟာ ၉ ​​-၅ ကမ္ဘာမှာမနေထိုင်ကြဘူး။ လူနာများသည်လှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုမှ ၁၂ နာရီသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသောနာရီကိုရရန်လိုအပ်နိုင်သည်။
Vyvanse စျေးနှုန်းဆိုင်ရာသတိပေးချက်များကို sign up လုပ်ပါနှင့်စျေးနှုန်းပြောင်းလဲသည့်အခါထွက်ရှာ!
Vyvanse ကိုကြာရှည်ခံအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာအွန်လိုင်းရှာဖွေမှုကမူးယစ်ဆေးရဲ့သက်ရောက်မှုရဲ့ကြာချိန်ကိုတိုးမြှင့်ဖို့မရေမတွက်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုဆောင်ကြဉ်းပေးပါလိမ့်မယ်။ ဤပြောဆိုချက်များနောက်ကွယ်ရှိအမှန်တရားရှိပါသလား။ တကယ်မဟုတ်ဘူး။
အချို့လူများကမဂ္ဂနီစီယမ်နှင့်ဗီဗီဆန်တို့ကိုပေါင်းစပ်ခြင်း၊ နို့နှင့်ကော်ဖီကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်း၊ gingko ဆေးပြားများကိုစားခြင်းနှင့်ကြီးမားသောအစားအစာများစားခြင်းတို့သည် Vyvanse ကိုကြာရှည်ခံစေနိုင်သည်ဟုဆိုသော်လည်းဤမဟာဗျူဟာများအမှန်တကယ်အလုပ်လုပ်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားမရှိကြောင်း Lieberman ကပြောကြားခဲ့သည်။
ပရိုတိန်း:၎င်းသည် Vyvanse တိုးမြှင့်နေသည့် ဦး နှောက်ဓာတုပစ္စည်းများကိုမြှင့်တင်ရန်အလားအလာရှိသည်။ ပရိုတိန်းသည်မူးယစ်ဆေးအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိလိမ့်မည်မဟုတ်သော်လည်း၎င်းသည်ဆေး၏သက်ရောက်မှုများကိုတိုးပွားစေသည်။
လေ့ကျင့်ခန်းADHD ရှိသူများစွာသည်တစ်ချိန်တည်းတွင်စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းနှင့်အခြေအနေနှစ်ခုစလုံးသည်အာရုံစူးစိုက်ရန်နှင့်အာရုံစူးစိုက်ရန်ခက်ခဲစေနိုင်သည်။ လေ့ကျင့်ခန်းသည်ဤရောဂါလက္ခဏာများကိုအထောက်အကူပြုနိုင်သည်။
ဗီတာမင်စီ:လိမ္မော်သီးဖျော်ရည်နှင့်ဗီတာမင်စီပါဝင်သောအခြားအရာများသည် Vyvanse ကိုတက်ကြွအမ်ဖီတမင်းအဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်သည့်ခန္ဓာကိုယ်၏စွမ်းရည်ကိုနှေးကွေးစေနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ကြာရှည်ခံနိုင်သော်လည်းခြုံငုံအကျိုးသက်ရောက်မှုမှာလျော့နည်းသွားလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်ပြောင်းဖူးပေါက်ပေါက်တစ်အိတ်ကို ပို၍ နှေးကွေးစွာစားခြင်းကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မည်ဟု Lieberman ကပြောကြားခဲ့သည်။
သူကဖြည့်စွက်စပျစ်သီးဖျော်ရည်များများသောက်ခြင်းသည်အလွန်ဆိုးရွားသည့်အကြံဥာဏ်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ Grapefruit ဖျော်ရည်သည်ခန္ဓာကိုယ်မှမူးယစ်ဆေးဝါးများကိုဖယ်ရှားပစ်သည့်နှုန်းကိုနှေးစေနိုင်သည်၊မှတ်သားရန်အရေးကြီးသည်၊ ADHD ဆေးကိုသောက်သုံးသည့်လူနာများစွာသည်စိတ်ရောဂါနှင့်စိတ်ရောဂါကဲ့သို့သောဆက်စပ်အခြေအနေများကိုကုသရန်အခြားစိတ်ရောဂါကုသမှုများကိုခံယူနေကြသည်။ ထိုကဲ့သို့သော SSRIs နှင့် tricyclic စိတ်ကျရောဂါကဲ့သို့သောဤဆေးညွှန်းများအတော်များများသည် Vyvanse နှင့်အန္တရာယ်ရှိသောမူးယစ်ဆေးဝါးအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည်။ ၎င်းသည်စပျစ်သီးအသီးဖျော်ရည်နှင့်အပြန်အလှန်ဆင်တူသည်။
Vyvanse (Vyvanse ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း) ကိုသင်စတင်စတင်သောအခါစွမ်းအင်၊ လှုံ့ဆော်မှုနှင့်အပြုသဘောဆောင်သောစွမ်းရည်များမြင့်တက်လာနိုင်သည်။ သို့သော်ဤသက်ရောက်မှုများသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ကြာရှည်ခြင်းမရှိဟုဒေါက်တာ Lieberman ကပြောသည်။
သငျသညျတိုးမြှင့်စွမ်းအင်ရှာတွေ့လျှင်, ခက်ခဲတဲ့ကံကောင်းပါစေ - ကမူးယစ်ဆေးဝါးရဲ့လုပ်ဖို့ထင်ဘာမချွတ်ဝတ်ထားသည်, သူကပြောသည်။ Vyvanse သည်အာရုံစူးစိုက်မှု၊ အဲဒီအချက်သုံးချက်ကိုသင်အာရုံစိုက်တဲ့အခါ၊ လူတွေထင်ထားတာကသူတို့ထင်ထားတာထက်ပိုပြီးကြာရှည်ခံသည်။
Vyvanse ကိုကြာရှည်ခံအောင်လုပ်ဖို့နည်းလမ်းတွေရှာမယ့်အစား Vyvanse သင့်အတွက်ပိုကောင်းအောင်လုပ်ဖို့၊ ဆေးကုသမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကောင်းဆုံးအတွေ့အကြုံရှိဖို့အကြံပေးချက်တချို့ကိုဒီမှာတွေ့နိုင်ပါတယ် -
မှန်ကန်သောဆေးကိုရှာပါ။Vyvanse သည် ၁၀-၇၀ မီလီဂရမ်မှအမျိုးမျိုးသောဆေးတောင့်ခုနစ်ခုကိုကမ်းလှမ်းသည်။ ပုံမှန်စတင်ဆေးပမာဏမှာ ၃၀ မီလီဂရမ်ဖြစ်ပြီး၊ တုံ့ပြန်မှုကိုစောင့်ကြည့်ပြီးနောက်ဆေးများကို ၁၀ မီလီဂရမ်မှ ၂၀ မီလီဂရမ်အထိတိုးလာသည်။ သင့်ဆရာ ၀ န်နှင့်အတူမှန်ကန်သောဆေးပမာဏကိုရှာဖွေရန်သင့်အာရုံ၊ အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်လှုံ့ဆော်မှုထိန်းချုပ်မှုအပေါ်ဆေး၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုတိုင်းတာရန်။
တုံ့ပြန်ချက်တောင်းခံရန်:သင်၏ Vyvanse အလုပ်လုပ်နေလားသေချာမသိပါ? ကွဲပြားခြားနားသောအားသာချက်များကိုသင်ကြိုးစားသည့်အခါသင်၏အာရုံတွင်တိုးတက်မှုများရှိသလားဟုသင်၏သိသိသာသာအခြားသို့မဟုတ်လုပ်ဖော်ကိုမေးမြန်းပါ။ တတိယပါတီ၏တုံ့ပြန်မှုသည်ပိုမိုမြင့်မားသောပမာဏသည်တစ်စုံတစ်ရာကိုလုပ်သည်ဆိုသည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အားကူညီလိမ့်မည်ဟု Lieberman ကပြောသည်။
အကျင့်ဆိုးများကိုချိုးပါ ADHD ရှိသူများသည်နောက်ကျလျှင်ပြေးခြင်းသို့မဟုတ်ဆုံးရှုံးခြင်းကဲ့သို့သောအကျင့်ဆိုးများဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိသည်။ စိတ်ရောဂါကုသမှုသည်၎င်းအလေ့အထများကိုလွယ်ကူစွာချိုးဖျက်နိုင်သော်လည်း၎င်းသည်အလုပ်များနေ ဦး မည်ဟုသူကပြောသည်။ Lieberman ကမူးယစ်ဆေးဝါး၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုဖြည့်စွက်ရန်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးပညာရှင်တစ် ဦး နှင့်အတူအမူအကျင့်ဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုများ (ပြက္ခဒိန်များအသုံးပြုခြင်းနှင့်သင်၏လုပ်ငန်းခွင်မှအာရုံပျံ့လွင့်ခြင်းများကိုဖယ်ရှားခြင်း) လုပ်ရန်အကြံပြုသည်။
သင် Vyvanse သည်အလုပ်မလုပ်ကြောင်းသို့မဟုတ်သင်လိုချင်သလောက်ကြာရှည်နေကြောင်းတွေ့ရှိပါကသင့်ဆရာဝန်နှင့်ပြောဆိုပါ။ သင့်တော်သောသောက်သုံးသောပမာဏကိုတွေ့ရှိသောအခါအလွန်ထိရောက်သော ADHD ဆေးများစွာရှိသည်။
Angie Everhart တွင်ကင်ဆာရှိသည်၊ သင်သိရန်လိုအပ်သောအချက် ၅ ချက်
သင်တစ်နေ့ vyvanse ၂ လုံးသောက်နိုင်သလား
lorazepam နှင့် xanax သည်အတူတူပင်ဖြစ်သည်